Soo dejisan Mova 1 – Vessoft
Mova – software ah si loo horumariyo aqoonta luqada Yukreeniyaan. software waa ay awoodaan in ay baro ama loo horumariyo aqoonta higaada, micne ah, ereyada, dhawaaqa, paronyms, iwm Mova lagu sameeyaa foomka ee ciyaarta, taas oo waa in aad dooratid xulashada jawaab sax ah su’aasha soo rogeen. software soo bandhigayaa sharaxaad of jawaabta saxda ah iyo siinayaa gunno dalwaddii in ay user. Mova kale oo ku jira qaybta gaar ah, kaas oo ah tusaalayaal cusub ee higaada saxda ah iyo ugaga oo ka mid ah erayada kala duwan waxaa lagu daray maalin kasta.
maktabadda weyn oo aqoonta
Jimicsiyada la sharaxaad ka
Soo dejisan Mova
Faallo ku saabsan Mova
Mova Xirfadaha la xiriira